Eating locally is in: 2021 Best Cities for locavores named | Culinary Travel News
Ikhaya » IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko » Ukutya ekuhlaleni kuku: 2021 Ezona zixeko zibalaseleyo zeedolophu ezinamagama
Ukutya ekuhlaleni kuku: 2021 Ezona zixeko zibalaseleyo zeedolophu ezinamagama
Ukutya ekuhlaleni kuku-kwakhona. Ngexesha lendyikityha yokufa, abantu baseMelika bahlaziye umnqweno wabo wokutya "locavore", okubandakanya ukutya okuvela kwiindawo zasekuhlaleni ezifana neegadi ezikufuphi, iimarike zamafama, kunye neendawo zokutyela ezisefama.
Ngaphambi kokutshixwa kwezinto, phantse ikota ezintathu zabantu baseMelika babesele besitya ukutya okuveliswe apha ekhaya. Ukunyuka kwangoko kwintengiso yeefama ukuya kubathengi kuthengisa ukuba imeko iyaqhubeka nokukhula.
Kodwa ayizizo zonke iidolophu zase-US ezifanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zabemi bendawo.
Kungenxa yoko le nto iingcali zeshishini ziwabumbile amanani ukumisela ezona ziXeko ziBalaseleyo ze-Locavores zika-2021.
Iingcali zithelekise izixeko ezikhulu ezili-150 zase-US kwizalathi ezili-14 eziphambili zobuhlobo bendawo. Zisusela kukuxhaphaka kwezolimo ezixhaswe luluntu kunye neefama zokutya kwiitafile ukuya kwintengiso yokutya kwasefama komthengi ngomntu ngamnye.
Zaqhuba njani izixeko? Naba abadlali abaphezulu nabali-10, belandelwa zezinye iindlela eziphambili zokuthatha.
Izixeko eziGqibeleleyo zeLocavores
1 ISanta Rosa, CA
2 IOntario, CA
3 Salem, OKANYE
4 IVancouver, WA
5 I-Worcester, i-MA
8 EJersey City, NJ
Izixeko eziWorse kakhulu zeLavores
I-Sioux Falls, i-SD
Amadlelo kwiPlate: Ngelixa uninzi lweedolophu ezinkulu zaseMelika zizifumana zikumgangatho ophakathi ukuya kwinqanaba eliphantsi, iidolophu zesathelayithi zilawula uninzi lweendawo eziphezulu kuluhlu lwethu. Iidolophana ezinje ngeVancouver, WA - emantla ePortland- naseYonkers, NY - ngaphandle nje kweBig Apple - ziindawo ezifanelekileyo phakathi kwezinto eziluncedo zasedolophini, ezinje ngeebhaka kunye neivenkile zokutyela, ngelixa zihamba kancinci ukusuka kwiifama zalapha.
ICarlifonia: I-Golden State ilawula ubume bethu, ibanga i-10 kwizixeko ezingama-20 eziphezulu. Izizathu zicacile: ICalifornia yindawo yamandla kwezolimo. Isinye kwisithathu sayo yonke imifuno kunye nesibini kwisithathu sazo zonke iziqhamo zase-US kunye namandongomane zivela kweli lizwe linye. Ngokuqinisekileyo kulula ukuyitya indawo yasekhaya xa uninzi lokutya kwesizwe lusezantsi kwendlela.
Akukho Manzi entlango: Izixeko ezithathu kwezi-10 ziphantsi eziseTexas, kunye ne-11th ukuthoba okuphantsi ukusuka kwiLonestar State, ngokunjalo. I-Amarillo yayisezantsi kwecandelo "lokuFikelela", inesitolo esinye kuphela sosilarha kunye nomzi-mveliso wobugcisa kubemi abangama-100,000. Ezinye iidolophu zaseTexas zibekwe kwindawo engalunganga, kodwa ezi zine zikufuphi emazantsi zonke zikwindawo eyomileyo yeNtshona Texas, apho kunzima ukufumana imveliso yasekhaya.